Foot Switch & Clip ကြိုးထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Foot Switch & Clip ကြိုးစက်ရုံ
သံမဏိ Tattoo ခြေနင်း
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: သံမဏိအသေးများ (အကြီးနှင့်အသေး) အကြီးစား - ခြေနင်းအရွယ်အစား - ၇၀ * ၁၀၅ * ၂၅.၅ မီလီမီတာထုပ်ပိုးအရွယ်အစား - 120x80x72mm အသေးစား - နင်းအရွယ်အစား - ၆၀ * ၇၆ * ၂၅.၅ မီလီမီတာထုပ်ပိုးအရွယ်အစား - ၁၀၃x ၇၅၆ ၆၂mm - ကြီးသောအလေးချိန် - ၂၈၄ ဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၃၁၁ ဂအသေးစား - အသားတင်အလေးချိန် ၂၆၁ ဂရမ်အလေးချိန် ၂၈၅ ဂဂရမ်ကြိုးအရှည် - ၂ မီတာရောင်းသည့်နေရာ - ၁ ။ သံမဏိပစ္စည်းများ၊ လုံလောက်သောအလေးချိန်သည်သံချေးခြင်း၊ မခံနိုင်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းရလွယ်ကူခြင်း၊ ၂။ အပေါ်ပိုင်းနှင့်အောက်ပိုင်းတွင်ရှိသောရာဘာအကာအကွယ်ပေးထားသောနေရာများ၊ ချော်ခြင်းမရှိသောဒီဇိုင်း၊
နယူး Square Tattoo Foot Switch
ပိုမိုကောင်းမွန်သောတပ်ဆင်မှုအတွက်ထိပ်ပေါ်ရှိ groove များရှိသည့်ရော်ဘာဖျာတစ်ခု။ ဖုန်းပလပ်တစ်ခုသည်မည်သည့်စွမ်းအင်တက်တူးထိုးမှုနှင့်မဆိုချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: အရောင်: အနက်ရောင်ပစ္စည်း: acrylic ကြိုးအရှည်: ခန့်မှန်းခြေ။ ၁.၅ မီတာ / ၅ ပေအထုပ် - ၁ * တက်တူးခြေနင်းခြေနင်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများ၏လုံခြုံမှုကိုပိုမိုသေချာစေရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော၊ အဆင်ပြေပြီးထိရောက်သောထုပ်ပိုး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးလိမ့်မည်။ SHIPPING INFORMATION ၁။ သင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့တင်ပို့သလား။ ဟုတ်တယ်၊ WJX အကြိုရောက်အောင်လုပ်နေတယ်။
၃၆၀ ဒီဂရီပတ်လည် Tattoo Machine Foot ခြေနင်းကိုပြောင်းပါ
အရောင်: အနက်ရောင် 1. ၃၆၀ ဒီဂရီခြေနင်းများ၊ ပျော့ပျောင်းသော silicone ဝါယာကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားကာဝါယာကြိုးအရှည်သည် ၁.၇၅ မီတာဖြစ်သည်။ (၂) အောက်ခြေရှိချောမွေ့သောဒီဇိုင်းသည်ကြမ်းခင်းနှင့်ပွတ်တိုက်အားမြှင့်တင်ခြင်းကိုများစွာမြှင့်တင်ပေးပြီးတက်တူးအတွင်းတွင်ခြေထောက်လှုပ်ရှားမှုမှာလည်းပြtroubleနာမရှိတော့ပါ။ ၃။ ကြယ်ငါးပွင့်ခလုတ်၊ အသစ်လှုပ်ရှားမှု (ဖွင့်ရန်နှိပ်ပါ၊ ပိတ်ရန်နှိပ်ပါ)၊ အမြင့်နှင့်ကြာရှည်ခံရန်အဆင်ပြေသည်။ အရည်အသွေးမြင့်သောပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ လှပသောအသွင်အပြင်၊ ၄။ စက်ရုံမထွက်ခင်တင်းကြပ်စွာစစ်ဆေးပြီး၊ ၅ ။
Professional ကခြေလျင်ထိန်းချုပ်ရေး Tattoo နင်း
Tattoo ခြေနင်းသည်တက်တူးထိုးခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောအထိခိုက်မခံသောခလုတ်ဒီဇိုင်းရှိပြီးသင်၏ခြေထောက်ပေါ်သို့လှည့်လိုက်ခြင်းဖြင့်တက်တူးစက်ကိုပါဝါဖြစ်စေသည်။ အလွိုင်းပစ္စည်းများ၊ လျှပ်ကူးပတ် ၀ န်းကျင်တွင် ၃၆၀ ဒီဂရီစင်တီမီတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးသေသပ်သောထောင့်မရှိ။ အင်္ဂါရပ်များ - အလွိုင်းပစ္စည်း၊ ၃၆၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်လျှပ်ကူးစီးဆင်းမှုပတ် ၀ န်းကျင်၊ သေတ္တာထောင့်မရှိ။ သင်၏ခြေကိုအလွန်အဆင်ပြေစေသည်၊ လှုပ်ရှားရန်အဆင်ပြေစေသည်၊ တက်တူးထိုးသည့်အနုပညာရှင်၏ငြီးငွေ့မှုကိုလျှော့ချစေသည်။ ခိုင်ခံ့သောလျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုရှိသောသန့်ရှင်းသောကြေးနီဝါယာကြိုး ၆၅ ခု ...
New Skull ပရီမီယံအရည်အသွေးတက်တူး Foot Switch
Function: power supply အတွက်ခြေထောက်နင်းနင်းနာမည်: Tattoo footpedal Package တွင်ပါဝင်သည်မှာ - 1pc အရောင် - အလိုအလျောက်ပါ ၀ င်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များကျွန်ုပ်တို့သည်ဥရောပစျေးကွက် USA တွင်တင်ပို့သည့်အတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိသည်။ Tattoo Supply Team ဖြစ်ပြီး OEM အသေးစားကိုလက်ခံရန်လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ အမိန့်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေး၊ အကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှု၊ အရည်အသွေးနိမ့်သောစက်ရုံ၏တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှုစျေးနှုန်းနှင့်အာမခံပါသည်။ OEM ကြိုဆိုသည်။ တင်ပို့ခြင်း - ၁။ တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ပို့ဆောင်ခြင်း။ 2. ငွေပေးချေမှုကိုအတည်ပြုပြီးနောက်အချိန်မီလုပ်ငန်းများ၌အမိန့်။ ၃ ။
360 ဒီဂရီ Tattoo နင်း
ပစ္စည်းအမည်: Tattoo ခြေနင်း ၆ မျိုးခွဲခြားသည့်ခြေနင်းခြေနင်းရှိပါတယ်။ Tattoo ခြေနင်းသည် power supply နှင့်တက်တူးထိုးစက်တို့နှင့်ကိုက်ညီသည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးပေါ့ပါးသည်၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ သင့်ရဲ့တက်တူးထိုးအလုပ်ပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်အဆင်ပြေအောင်။ တက်တူးထိုးတဲ့အနုပညာရှင်တွေအတွက် Professional တက်တူးထိုးကိရိယာ။ အင်္ဂါရပ်များ: လှပသောအသွင်အပြင်နှင့်ဒီဇိုင်း။ တက်တူးစက်အမျိုးမျိုးအားတပ်ဆင်ရန်။ Foot pedal switch သည်တက်တူးထိုးစက်၏ခလုတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ချိတ်ဆက်မှုလိုင်းသည်ချိတ်ဆက်ရန်လုံလောက်သည် ...
အရည်အသွေးမြင့် Tattoo စက်ခြေလျင်ခလုပ်ခြေနင်းထိန်း Controller ပါဝါထောက်ပံ့ရေး
ပိုမိုကောင်းမွန်သောတပ်ဆင်မှုအတွက်ထိပ်ပေါ်ရှိ groove များရှိသည့်ရော်ဘာဖျာတစ်ခု။ Phono-plug သည်မည်သည့် power tattoo supply နှင့်မဆိုဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ခြေနင်းသည်တက်တူးထိုးစက်၏ပါဝါခလုတ်ကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဒီနင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်စူပါအဆင်ပြေသည်။ Package စာရင်း - ၁ * ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများ * Tattoo Foot Switch နင်း။ ၁ နာရီ ၂ နာရီဈေးနှုန်း။ ၂။ ၂၄ နာရီအတွင်းအီးမေးလ်အားလုံးကိုပြန်လည်ဖြေကြားလိမ့်မည်။ ၃။ အမှာစာအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်နမူနာကြေးငွေပြန်အမ်းမည်။ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ၁။ ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်နမူနာကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။ ...
Square ပလတ်စတစ် Tattoo ခြေနင်း
ဤထုတ်ကုန်သည်အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးသင့်အတွက်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ယခုကြည့်ရှုမရသနည်း အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ - မတော်တဆဖြစ်မှုမရှိသည့်မျက်နှာပြင်နှင့်ဆန့်ကျင်နေသည့်အခြေခံသည်သင်နှင့်သင့်ကြမ်းပြင်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အနက်ရောင်ရိုးရှင်းသောစတုရန်းဒီဇိုင်း၊ တက်တူးထိုးရန်ကောင်းမွန်သောကိရိယာများ။ အကြမ်းခံ။ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီးအလှပြင်ဆိုင်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ အလင်းနှင့်အကွာအဝေးချွေတာခြင်းသည်သင့်အတွက်ကောင်းမွန်သည်။ တက်တူးထိုးစက်အမျိုးမျိုးအတွက်အကောင်းဆုံး။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: အမျိုးအစား: Tattoo ခြေနင်းပစ္စည်း: ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: approx ။9*6* 2cm / 3.5 * 2.4 * 0.8in (L * W * H) Item Weight: Ap ...
Tattoo နင်းပတ်ပတ်လည်ကြယ် ၅ ပွင့်ကြယ်ပွင့်
ပတ်ပတ်လည် 360 Star Tattoo Foot Switch နင်း Tattoo စက်များအတွက်သံမဏိခြေနင်း Tattoo Power Supply သတ်မှတ်ချက်ဒီ Tattoo Foot Pedal / Foot switch သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောကျွမ်းကျင်သောအရည်အသွေးမြင့်ခြေထောက်ဖြစ်သည်။ ခြေနင်းပါသောခြေနင်းပါ ၀ င်ပြီးနစ်မွန်းခြင်းကင်းဝေးသောအခြေမခံသောခြေနင်းပါရှိသည်။ Tattoo Machines အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်တက်တူးထိုးခြေနင်း, ဖက်ရှင်ပါရှိပါတယ်! Skid-anti-marring အခြေပြုခြေချောင်းပါသော Professional-quality, foot-switch pedal ။ အကြမ်းခံ၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်း။ သယ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည်။
သံမဏိပေခလုတ်ခုံ Tattoo နင်း
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ၅ Star ပေကြိုးနှင့် ၁/၄ လက်မဖုန်းပလပ် ၃၆၀ Â Star Star Tattoo ခြေနင်းကိုလေလံတင်ရောင်းချနေသည်။ မတော်တဆတိုက်ဖျက်ရေးဆန့်ကျင်ရေးအခြေခံဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူသောဒီဇိုင်းသည်ထိပ်တန်းစက်ကိုထိန်းချုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာပစ္စည်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ Feature Info: အခြေအနေ - အသစ်စက်စက်360Â°စတားဒီဇိုင်း Tattoo ခြေနင်းအရှည်: 5′ft အရောင်: Silver Standard 1/4″ သံမဏိဖုန်း -plug ။ Non- မတော်တဆတိုက်ဖျက်ရေး Anti-marring အခြေစိုက်စခန်း။ အရွယ်အစား:3Â½” x3Â ...
Weave Tattoo Clip ကြိုးနှင့် RCA ကြိုး
နောက်ဆုံးပေါ်တက်တူးထိုးစက်ဆီလီကွန်ကုတ်ကြိုးနှင့် RCA ကြိုး ၆ ပေအရှည် (၁၈၀ စင်တီမီတာ) အထူ - ၆ မီလီမီတာအရည်အသွေးမြင့်ဆီလီကွန်ပျော့ပျောင်းသော၊ ၂၂ AWG ကြေးဝါဝါယာကြိုး ၂၂ ခု AWG ကြေးဝါဝါယာကြိုးပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ရန်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုစီကိုပလပ်စတစ်ပြွန်ဖြင့်ပတ်ထားသည်။ ကြိုး၊ RCA ကြိုးပစ္စည်း - ဆီလီကွန် / ကြေးနီအသုံးပြုမှု - တက်တူးထိုးစက်များအတွက်အရောင် - အဝါရောင် - အစိမ်းရောင် - အပြာရောင် - ခရမ်းရောင် - အနီရောင်မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ ၁။ ထုပ်ပိုးခြင်းသည်အဘယ်နည်း။ - MONON Tattoo Brand Package၊ ကြားနေအထုပ်၊ OEM အထုပ် (ပမာဏ) ရရှိနိုင်သည်။ ၂။ အရည်အသွေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ - Qu ...
DC & RCA ဆက်သွယ်မှုတက်တူးထိုးကြိုးကြိုး
အသားတင်အလေးချိန်: ၂၇ ဂရမ်စုစုပေါင်းအလေးချိန် - ၃၈ ဂဂအရွယ်အစား - ၂ မီတာ * ၁.၈ မီလီမီတာထုပ်ပိုးခြင်း - opp အိတ်ထုပ်ပိုးအရောင် - အရောင်သုံးရောင် - အနီရောင်စက်ဝိုင်း - အပြာ Interface: RCA interface အားသာချက် - ၁။ စဉ်ဆက်မပြတ်စတိုင်၊ ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးရှိသည့်အလွန်ကောင်းမွန်သောချိတ်လိုင်းဖြစ်သည်။ ခက်ခဲတဲ့အရည်အသွေး ၂။ သန့်ရှင်းသောကြေးနီမျက်နှာပြင်၊ အဆင့်မြင့်၊ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၃။ စံသတ်မှတ်ထားသောအရွယ်အစား၊ ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ 4. silicone မျက်နှာပြင်ကိုထူသည်။ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများမေး။ ပစ္စည်းပို့ရန်ကြာချိန်မှာ ၃၅ ရက် - ရက်သတ္တပတ်ဖြစ်သည်။